Warbixin: Shan Waxyaabood Oo Sabab U Ah In Xulka Talyaaniga Uu Ku Hungoobo Inuu U Soo Baxo Koobka Adduunka Ee 2018 - SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD | SHABAKADDA WARBAAHINTA GEESGUUD
Warbixin: Shan Waxyaabood Oo Sabab U Ah In Xulka Talyaaniga Uu Ku Hungoobo Inuu U Soo Baxo Koobka Adduunka Ee 2018
Italy ayaa ku jirta xaalad xun ka dib markii xulka qarankooda ay ku guuldareysteen inay markii ugu horeysay u soo baxaan Koobka Adduunka tan iyo 1958. Hadaba waxaan halkaan idiin kugu soo gudbineynaa shan waxyaabood oo sabab u ahaa in Azzurri ay ka harto Koobka Adduunka oo ay qortay jariirada Sport.
Gian Piero Ventura waxaa loo dhiibay shaqada xulka Talyaaniga markii uu soo dhamaaday ciyaarihii Euro 2016 ka dib markii uu shan sannadood oo cajiib ah ku qaatay Torino kuwaasoo uu ka soo bixiyay Serie B islamarkaana uu soo gaarsiiyay wareega 16ka Europa League sannadii 2015. Sannadkii 2014 waxa uu kooxda ku hogaamiyay kaalinta todobaad ee Serie A waana booskii ugu fiicnaa ee ay gaaraan tan iyo 1992, waxaana uu siiyay guushoodii ugu horeysay ee ay ka gaareen deriska ay aadka u neceb yihiin ee Juventus muddo 20 sanadood ah.
Sidaasi oo ay tahay hadana bedel fiican uma noqonin Antonio Conte kaasoo seddex jeer Serie A ku guuleystay islamarkaana Italy soo gaarsiiyay wareega sideed dhamaadka ee Euro 2016. Ventura waxa uu ahaa markii shaqada loo dhiibayay 68 sanno jir aan waligiis macalin u noqonin kooxaha waa weyn ee Serie A islamarkaana koobka kaliya uu qaaday ay aheyd koob Serie C ah uu qaaday sannadii 1996.
Dadka wax odorasa ayaana soo jeedinayay in xul qaaday afar Koob Adduun iyo labo koob oo Qaramada Yurub ah inay u baahnaayeen shaqsi sumcad intaas ka weyn leh oo sarre u sii qaada kalsoonida kooxda iyo tayada xulka.
Da’ yarta oo la iska indhotiray
Waa lagu doodi karaa in Italy aysan heysanin xiddigo la mid ah kuwii qaaday Koobka Adduunka sannadii 2006, laakiin waxa ay heystaan weli ciyaaryahano tayo fiican leh oo ay soo xulan karaan. Dhibaatada furaha u aheyd xulka Talyaaniga waxa ay aheyd in tababare Ventura uusan ciyaarsiinin ama xitaa mararka qaar uusan u soo yeerin da’ yarta ugu fiican Talyaaniga.
Shaxdii Italy ay ku soo shirtagtay xalayto waxa ay dhamaantood ka weynaayeen 25 halka lix ka mid ah ay da’dooda kor u dhaafeysay 30 sanno, iyadoo da’ yarta tayada leh sida xiddiga Juventus Federico Bernardeschi, daafacyada Atalanta Leonardo Spinazzola iyo Mattia Caldara iyo xiddiga khadka dhexe ee Roma Lorenzo Pellegrini aysan jirin meel lagu arkay.
Maamul xumo xaga sarre ah
Madaxweynaha xiriirka kubada cagta Talyaaniga Carlo Tavecchio ayaa mas’uul ka ahaa shaqaaleysiinta Ventura, waxaana uu haatan qaadayaa mas’uuliyada musiibada soo wajahday xulka Azzurri.
Ventura isma casilin xalayto, xiriirka kubada Talyaaniga ayaana ka labalabeynaya inay ceyriyaan iyadoo Tavecchio uu shaaciyay inay mustaqbalkiisa go’aan ka gaari doonaan berri oo Arbaco ah.
Waxaana ay taasi muujineysaa in Tavecchio uusan aheyn nin hogaamin kara kubada cagta Talyaaniga.
Wadan jecel dadka da’da ah
74 jirka Tavecchio waxa uu calaamad u yahay dhaqanka soo jireenka Talyaaniga oo dadka da’da laga qiimo sareysiiyo dadka da’da yar. Waxa uu shaqaaleysiiyay Ventura oo 70 sanno jir noqonaya bisha Janaayo, Ventura isna waxa uu sii heystay xiddiga gaboobay sida De Rossi (34) iyo Andrea Barzagli (36)
Tavecchio waxaa loo doortay madaxweynaha xiriirka kubada cagta Talyaaniga isagoo cod badan helay doorashadii dhacday 2014, 18 ka mid ah 20ka kooxood ee Serie A ayaana taageeray isagoo ka guuleystay xiddigii hore ee Italy iyo AC Milan Demetrio Albertini.
Nidaam ciyaareed oo aan joogta aheyn
Khibrad yarida Ventura ee heerka ugu sareeya kubada cagta ayaa banaanka u soo baxday intii lagu jiray isreebreebka Koobka Adduunka, isagoo ku guuldareystay inuu helo shax ama taatiko u shaqeysa oo uu ku dheganaado.
Sida uu tababaraha ugu guuldareystay inuu isticmaalo Jorginho iyo Lorenzo Insigne ayaa ka careysiisay dad badan iyadoo tababaraha uu diiday inuu dheelo seddex weerar oo afka hore iyo seddex khadka dhexe oo ka danbeysa taasoo u muuqaal eg shax ciyaareedka Napoli ee ay labadaan ciyaaryahan wacdaraha ku dhigaan.
Taas bedelkeeda Ventura waxa uu ku jahwareeray isticmaala tashkiilado badan isagoo iska indhotiray Jorginho muddo ku dhow labo sannadood ka hor inta uusan ciyaarsiinin kulankii xalayto iyadoo Italy ay rajadeeda ceel ka raaracdo.
Isagoo ciyaarsiiyay Insigne 14 daqiiqo lugtii koowaad ayuu hadana iska ilaaway inuu ciyaarsiiyo xalayto taasoo ka careysiiyay taageerayaasha Talyaaniga iyo weliba Daniele De Rossi oo tababaraha u sheegay inuu Insigne ciyaarsiiyo.